mairie-antananarivo – Fitsirihana sy fitsarana tetik’asa “fifaninanana tanana madio”- Boriboritany faha efatra
Natomboka androany maraina, talata faha 13 martsa 2018, ny fitsirihana sy ny fitsarana ny fokontany teto amin’ny boriboritany fahaefatra, izay ao anatin’ny “tetik’asa fifaninanana tanàna madio”. Ity farany, dia tafiditra indrindra ao anatin’ny fandaharan’asa ao anatin’ny telovolana voalohan’ny boriboritany.
Raha tsiahivina dia feno iray volana androany ny fanentanana ny sy ny fanadiovana teny amin’ny fokontany 32 teny anivon’ny boriboritany fahaefatra. Mandritra ity herinandro ity dia hitsidika ny fokontany zone I, ka hatramin’ny zone IV ny avy eto amin’ny sampan-draharaha “Tutelle” ka hanome naoty arakarakin’ny fahadiovana sy ny filaminan’ny tanàna.
Ireto avy ary ny fokontany notsidihana androany izay ao anatin’ny zone I: izay mitsinjara ho fokontany valo: Andavamamba Ambilanibe, Ampefiloha Ambodirano, Ilanivato Ampasika, Anosipatrana Andrefana sy Antsinanana, Ivolaniray, Anosibe ouest II, Ampangabe Anjanakinifolo.